Taariikhda Yaya Toure - BBC News Somali
Iyadoo aad loogu aqoonsan yahay cayaartoyda qadka dhexe kuwooda ugu wanaagsan ee jiilkiisa, ayaa Yaya toure uu yahay quwad wayn, waa general-ka garoonka, oo xushmad ka haystay cid walba.
Wuxuu ku biiray kooxdiisa hadda sanadkii 2010, waxaa ilaa markaa uu ku guulaysatay tartanka Premier League – waa markii ugu horaysay ee muddo 44 sano ah ay Man City koobka qaaddo– iyo sidoo kale koobka FA iyo kan Community Shield.
Toure 109 kulank oo uu u dheelay Man City, wuxuu u dhaliyay 23 gool, oo ay ku jiraan laadad meel dheer uu ka ganay oo si qurux badan shabaqa u galay, waxaana uu wali yahay sida laga yaabo cayaaryahanka ugu muhiimsan ee naadiga.
Wuxuu ka soo tagay kooxda Barcelona si uu ugu yimaado City, wuxuu joogay Barcelona sadex sano, wuxuu uruursaday koobab sida qaadidda koobka League-ga Spain, Tartanka Champions League Europe, koobka Uefa Super cup iyo koobka naadiyada adduunka ee FIFA.
Cayaaryahankan 30 jirka ah wuxuu koob la qaaday kooxda Giriiga ee Olympiakos, iyo koob uu la qaaday kooxda dalkiisa ee ASEC Mimosas.
Niyadjabkiisa ugu wayn wuxuu Toure kala kulmay heerka caalamiga, iyadoo jiil dahabi ah ay haysato kooxda Ivory Coast hadana way ku guuldaraysatay in ay koob ku guulaysato, iyadoo cayaartii final-ka sanadkii 2012 ay ka guulaysatay Zambia, taasoo lagu tilmaamay mid ka mid ah lama filaankii ugu darnaa ee koobka Africa.
being beaten in the 2012 final by Zambia was one of the greatest shocks in African football.
Hadda oo uu 30 jiro Toure kama muuqato in uu hoos u dhacayo, si qurux badan ayuuna sanadkan ula bilaabay kooxdiisa Man City, ilaa hadana wuxuu u dhaliyay 7 gool, iyadoo uu si joogto ah si qurux badan u cayaarayay.
Laba jeer ayuu ku guulaysatay abaalmarinta cayaaryahanka kubadda cagta ee Africa ee xiriirada oo dhan, waxaana uu sanadka Toure noqday cayaaryahanka kaliya ee African ah ee lagu daro magacyada loo soo xulay abaalmarinta cayaaryahanka adduunka ee FIFA sanadkan.
Qoraal Ra’yi ah:
Waxaa qoray weriyaha cayaaraha BBC Ian Hughes
Waxaa dhici karta in aysan u ahayn 12-kii bilood ee ugu mira-dhalka badnaa dhinaca koobaka ee Yaya Toure, balse 2013 waxaa uu muujiyay cayaar wanaagsan, awood, farsamo, hal abuur, goolal, hogaamin dhinaca caalamiga ee kooxdiisa Ivory Coast.
Tilmaamahaas ayaa ka bannaanka u soo saaraya, iyadoo uu yahay cayaaryahanka qadka dhexe oo dhamaystiran, iyo laga yaabeen ninka ugu wanaagsan markay noqoto orod garoonka gees ka gees. Way adag tahay in laga fakaro cid la mid ah dhinacan cayaaraha garoomada.
Kaligii ayuu ku yahay liiska loo soo xumay ee ka kooban 23 cayaaryahanka ee abaalmarinta sanadka cayaaryahanka ee adduunka ee FIFA ay bixiso.
Dadka yar ayaa ka doodi kara in uu yahay cayaaryahanka ugu saamaynta badan qaaradda waqtigan la joogo.
Iyadoo isaga iyo kooxdiisa Manchester City ay wali la xanuunsanayaan koobka Premier League ee sanadkan oo ay ka qaaday kooxda ay aadka u loolamaan Manchester United, ayaa Toure wuxuu ku bilaabay cayaaraha xilliga si heer sare ah, isagoo ay ka muuqato in ay ka go’an tahay in uu koobka dib u soo celiyo.
Toure, wuxuu ayaa ahaa cayaaryahanka cayaarta markii City ay 4-1 ku tuntay United bishii September, wuxuuna ilaa hadda dhaliyay 7 gool- oo ay ku jiraan laadad toos ah oo aad loola yaabay, taasoo cadayn u ah awoodiisa gaarka ah ee kubadaha la dhigo.
Markay noqoto garoonka dibediisa, Toure waxaa uu hogaamiyay dagaalka ka dhanka ah qunsuriyadda kadib markii isaga laftiisa la cunsuriyeeyay cayaar ka tirsan Champions League oo ay la dheelaysay kooxdiisa kooxda Ruushka ee CSKA Moscow bishii October – wuxuu muujiyay dabeecad dulqaad leh oo u dhiganta awoodiisa kubadda cagta.
Dhacdadaas aan wanaagsanayn way dhici kartaa in ay yara saamaysay niyadiisa, balse Toure ayaa wixii ka dambeeyay cayaartiisu aad u sii muuqatay.
Xirfad wanaagiisa aan dhamaanayn ee garoonka gudihiisa – sharafta marka uusan cayaarayn ayaa ka dhigaya Toure ninka aan u xulan lahaa sanadkan abaalmarin Cayaaryahanka sanadka ee BBC.